Halkee ayuu marayaa dhismaha wadada Afgooye iyo Muqdisho? | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Halkee ayuu marayaa dhismaha wadada Afgooye iyo Muqdisho?
Halkee ayuu marayaa dhismaha wadada Afgooye iyo Muqdisho?
Isticmaalka wadada isku xirta Muqdisho iyo afgooye waa marin muhiim ah,waxaana isaga kala goosha dhamaan gaadiidka u safra gobolada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya,kuwaasi oo ku soo dhaca degmada Afgoye ee gobolka Shabeelada Hoose.
Inkastoo wadadaasi ay burbursanayd muddo 30 sano ku dhow ayaa hadana waxaa soconaya dadaalo ku aadan dib u dhiska wadadaasi,mashruucaasi oo uu fulinayo Sanduuqa horumarinta (Qatar),kadib markii dowladda Soomaaliya ay isla garteen.
War ka soo baxay Sanduuqa hormarinta (Qatar) ayaa lagu sheegay in uu si habsami leh uu u socdo mashruuca lagu dhisayo wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye,waxaana Talaabadan Sanduuqa horumarinta Qatar uu qaaday ay ka mid tahay qorshayaal dib loogu dhisayo wadooyinka kuyaala gobolada dalka Soomaaliya.
Kadib muddo dhowr bilood ah oo hakad uu kujiray mashruuca dhismaha wadadaasi,ayaa hadana dhawaan dib loo bilaabay,iyadoo la arkayo howlwadeenada qaabilsan dhismaha wadada Muqdisho iyo Afgooye isku xirta,kuwaasi oo adeegsanaya agab iyo gaadiid loogu talagalay fulinta howshaasi.
Qaab dhismeedka laamiga cusub ee la saarayo wadadaasi ayaa ah labo laami,oo loogu talagalay gawaarida soo socda ama kuwa sii socda ay isaga gudbaaan si fudud.
Mashaariicdaasi ayaa dhanka kale fursad shaqo abuur u ah dhalinyarada Soomaaliyeed,iyadoo dalka horumarkiisa ay qeyb weyn ka tahay.
Maqaal horeMadaxweyne ku xigeenka Galmudug oo qaabilay Safiirka Qadar ee Soomaaliya
Maqaal XigaDuqeyn ka dhacday Sh/Hoose oo lagu dilay horjooge ka tirsan Al-Shabaab.